Madasha Xisbiyada Qaran oo mowqif lama filaan ah ka qaadatay heshiiskii Dhuusamareeb III | Mudug24
Madasha Xisbiyada Qaran oo mowqif lama filaan ah ka qaadatay heshiiskii Dhuusamareeb III
Madasha Xisbiyada Qaran ayaa soo dhoweysay natiijada ka soo baxday shirkii Dhuusamareeb 3 ee ay ka qeyb galeen madaxda DF, dowlad goboleedyada qaarkood iyo maamulka gobolka Banaadir.
Warka madasha ayaa ahaa mid lama filaan ah, maadaama mucaaradka dowlada qaarkood iyo madaxda Puntland iyo Jubbaland ay ka soo horjeesteen natiijada shirkaas, waxaana dad badan ay saadaalinayeen iney ku gacan seyri doonaan sida looga bartay madaxda mucaaradsan DF.
Qoraal ka soo baxay madasha ayaa si gaar ah loogu soo dhoweeyey hannaanka doorashada ee ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb III waxayna u aragtaa hannaankaasi inuu yahay tallaabo loo qaaday dhinaca saxda ah si loo qabto doorasho ku dhacda waqtigeeda oo loo dhan yahay.
Madashan oo ay hogaamiyaan madaxdii hore ee dowlada Somalia ayaa tilmaantay in heshiiska Dhuusamareeb 3 uu weli u baahan yahay dhameystir wada-ogol ah sidii horey loogu madlanaa, ayna muhiim tahay in laga qeyb geliyo dhinacyada ka maqan.
Hoos ka akhriso qoraalka Madasha
Previous articleMadaxweyne Qoor Qoor oo Xalay ka hadlay Maamulada Shirka ka maqan iyo Fakarkooda
Next articleMadaxweyne Farmaajo oo kulan la qaatay Madaxda Maamul Goboleedyada